AwdalOnline - Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
You are here : Home » Maqaal » Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
For AwdalOnline Updates admin On Saturday, January 26th 2013. Qeybta Wararka Maqaal Gadabuursow noqonmeyso beerka jecliyaa xeydha jecliyaa ee kala doorta Saylac iyo Somaliland
Waxa taa kasii daran Gadabuursi maba ogaba wax lakala wado lagamana hadlin. Waxaan la yaabey ineyna cidiba ogeyn waxan laga baayac mushtareynayo oo xitaa marka la weydiiyo Saylici oo ah madaxweyne ku xigeen aanu war ka heyn arimaha SNM kolba dhan u wado oo sida igu maqaalo ah afkiisaa laga hayaa bal in la eego waxey la yimaadaan. Waxaasi arin maaha waa doqoniimo. Madaxweyne ku xigeenkii dalka la magac baxey Somaliland oonan ogeyn wasiiradiisii kolba waxan ay Saylac gaynayaan ka dibna ula dhaafayaan Jabuuti waa ayaan daro iyo habacsanaan ka muuqata inankeenan ku fadhiya kursigii labaad. Wasiir Duur, wasiir Zamzam, Ina Biixi, Timacad iyo waliba waxa dibjirka Hargeysa ogyahay siduu u ogaan waayay madaxweyne ku xigeen waa amuuro aan la garaneyn.
Gadabuursi ha kala doorto Saylac iyo Somaliland; Gadabuursow noqon meyso sidii hore loo sheegay beerka jecliyaa xaydhana jecliyaa. Labo israaca maaha ee waa in miduun lagu ekaado. Somaliland waa cadowga Saylac waana ta inag wareejineysa. Cadowga Saylac noqon maayo sadiiqeena. Gadabuursow sidey ku dhici kartaa inaan ku aamino dowlada Somaliland iney gacanta ku qabato arimaha Saylac. Sidey ku dhici inaan dawo ka doono ka ina dilaya. Gadabuursow siday ku dhici inuu ka ina dooxayaa inoo damqado.
Saylici qudhiisu ha kala doorto Saylac iyo Saylici Madaxweyne ku xigeenka dowlad beeleedka Somaliland waa nin sita naaneysta magaalada Saylac. Saylici runtii maanta waa naaneys uu ku faani lahaa nin wal oo reer Awdal ahi. Isaga iyo reerkooduba sida la ogsoonyahay waa Sayliciyiin asal ah. Waxa xiiso dhalinaya manta runtii waxa weeyi arinta Saylac oo cakiran iyo madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboleedka Somaliland oo Saylici ah. Taasi waxey muujineysaa Saylici oo ah madaxweyne ku xigeenka dowlada iibineysa Saylac. It really is a challenge to Saylici. Saylac ma waxey ka bixi gacanta Gadabursi yada oo Saylici yahay madaxweyne ku xigeenka dowladan dumineysa taariikhda Saylac? Ma badbaadin karaase?
Anigu aan kala doorto reer Awdalow kol hadii aan Gadabursi ahey Saylac iyo Somaliland … Waxaanan halkan si xoogle ugu dhawaaqayaa inaan doortey Saylac. Sitiin daahiya haku dhacdo Somaliland. Wakaa go’aankeygu ee akhristow kala dooro oo iisoo qor. Suleyman Dugsiye
« Zeila Was A Gadaboursi City Yesterday And Today By Suleiman Egeh
Gadabuursi Waa Inuu Talo Iyo Go’aan Adag Ka Qaato Shirka Isbahaysiga Laba Beelood Uga Socda Jabouti Ee lidiga Ku Ah Jiritaankiisa »